Cinefy Professional iPhone Tifatiraha Fiidiyaha | Martech Zone
Cinefy Professional iPhone Video Tafatirka
Talaado, Nofeembar 29, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Aag ka mid ah suuqgeynta waxyaabaha aan raadineyno inaan kordhino waa adeegsiga fiidiyowga. Waxaan u kuur galaayay sida dadka kale ee wax qora ee wax qora ay fiidiyowga u isticmaaleen laakiin waxaan qiyaasayaa inaan ahay qof yar oo xariif ah… Waxaan rabaa wax ka fiican. Waxaan dhamaanteen lawareegeynaa kamaradaha HD iyo aaladuhu way fududahay in la isticmaalo, markaa maxaan u wada burburin lahaa xoogaa sheeko cajalad fiidiyoow ah oo aan qof la joogo oo aan ku riixayo balooggan aan si adag u shaqeyney si aan meel sare u gaadhno heerka tayada?
Waxay umuuqataa inay wax u fududdahayn si dhakhso leh dadka adeegsada iPhone-ka, iyadoo lasaaray beta xaddidan Filimaanta suuqa. Waa tan shey wax soo saar noocyada tafatirka ah ee lagu guuleysan karo… oo kuu oggolaanaya inaad wax ka beddesho fiidiyowga, aad ku darto saamaynta, iyo xitaa xulashada heesaha dhawaaqa aan lahayn xuquuqda lahaanshaha.
Cinefy waa aalad video tafatirka iyo saamaynta madal loogu talagalay iPhone halkaas oo dadka isticmaala ay abuuraan oo ay wadaagaan fiidiyowyo isku dhafan oo leh saameyn muuqaal oo tayo sare leh. Cinefy wuxuu awood u siiyaa dadka isticmaala ee aan lahayn xirfado wax sixid ah si ay dhaqso ugu soo geliyaan muuqaalada, ay ugu daraan muusikada, una adeegsadaan saamayn muuqaal ah oo layaableh oo leh isdhexgal dareen leh iyo mid fudud.
"Waxaan u sameynay Cinefy si aan ugu dhejino qalabka soo saarista tayada ugu xiisaha badan Hollywood si toos ah gacmaha isticmaalaha," ayuu yiri Dan Hellerman, oo ah madaxa shirkadda App Creation Network. Awoodda istuudiyeyaashu ay ku dhiirrigelin karaan magacyadooda, iyaga oo ku dhiirrigelinaya dadka isticmaala saamaynta dhabta ah ee ku aaddan bandhigyadooda ama cayaaraha, waa aalad suuq-geyn qarxin ah.
In Cinefy, xirmooyin shaqsiyadeed ama summad leh xirmooyin ayaa loo heli karaa barnaamijyada laga soo dejisto, iyadoo la siinayo TV-yada iyo istuudiyaha ciyaarta awood u leh inay ku suuqeeyaan guryaha cusub qaab abuuraya kaqeybgal xiiso leh iyo awood u leh soo-gaadhis ballaaran oo fayras ah.
Muusig saaxiibtinimo leh waxay iskaashi la sameysay Chairseven iyo App Creation Network si Cinefy loo siiyo marin u helka buugeeda dhameystiran ee heesaha xuquuqda lahaanshaha ee la cadeeyay ee loogu talagalay in lagu abuuro heesaha saxda ah, ee laga heli karo barnaamijka Cinefy ee lagu dhisay hal-liisan shatiyeyn. Muusikada Saaxiibtinimada leh ayaa ah ururinta muusigga ee ugu horreeya ee loogu talagalay nuxurka isticmaalaha soo saaray, oo bixiya 100% sharci ah iyo dhammaan muusigga xuquuqda lagu nadiifiyey ee loogu talagalay shakhsiyaadka iyo caadooyinka warbaahinta tooska ah ee internetka.
Waxaa loo dhisay inuu noqdo mid bulsheed, Cinefy ayaa raba si toos ah ugu dhoofiya Facebook, Youtube, iyo Vimeo. Intaa waxaa sii dheer, isticmaaleyaashu way keydin karaan faylal badan oo mashruuc ah waxayna u dhoofin karaan qalabka kamaradooda qalabkooda. Mustaqbalka, Cinefy waxaa loo diyaarin doonaa aaladaha iPad iyo Android labadaba, waxayna u oggolaan doontaa dadka isticmaala inay marinnada ay soo dejinayaan ku helaan qalab kasta.
Tikniyoolajiyada tifaftirka asaasiga ah ee Cinefy ayaa loo heli karaa shatiyeynta sumadda cad ee macaamiisha shirkadaha doonaya inay dhisaan oo ay dhiirrigeliyaan barnaamijyadooda daabacaadda fiidiyowga u gaarka ah. Istuudiyaha ama dhiirrigeliyeyaasha, xirmooyinka saamaynta Cinefy waxay kakooban karaan inta udhaxeysa 10-15 calaamado muuqaal ah oo muuqaal ah ama sawir gacmeedyo, waxaana looqeybinkaraa soo degsasho bilaash ah ama lacag leh. Xirmooyinka saamaynta ayaa sidoo kale loo qaabeyn karaa inay ku jiraan waxyaabo kafaala-qaad ah oo dhinac saddexaad ah si kor loogu qaado ololeyaasha muddada-gaaban ama tartamada fiidiyowga ee adeegsadahu soo saaro.
Tags: shaneemotafatirkaiphoneipad appmovietafatirka filimka
Slideshare - Isuduwaha Aamusnaanta Suuqgeynta Mawduuca
Nov 29, 2011 saacadu markay tahay 2:26 PM
Kani waa mustaqbalka saxaafadda, sameynta filimka, muujinta, iyo yaa garanaya waxa kale. Wadarta badalida ciyaarta. Waad ku mahadsantahay wadaagista 🙂
Nov 29, 2011 saacadu markay tahay 4:59 PM
Ma hubo in qof arkay maalinti aan awood badan ku haysan lahayn gacmaheenna!
Nov 29, 2011 saacadu markay tahay 6:12 PM
Runtii waanu ku qanacsanahay maqaalka, iyo ereyada naxariista leh ee ka imanaya Doug iyo Zoomerang. Waxaan si adag u aaminsanahay inay tani tahay mustaqbalka fiidiyowga bulshada. Waxaan u maleyneynaa in 2012 uu noqon doono sanadka warbaahinta bulshada summad leh, waxaana rajeyneynaa in Cinefy ay gacan ka geysan karto hogaaminta dacwada!
Nov 29, 2011 saacadu markay tahay 8:54 PM
Fiican! Weli iskuma dayin tan, laakiin waxay umuuqataa hab fiican oo lagu soo qaban karo dhawaq tayo sare leh oo ay weheliso fiidiyowgaaga (oo ay ku siinayaan degganaansho dheeraad ah) http://www.amazon.com/Fostex-Audio-Interface-Iphone-AR-4I/dp/B005DNAB12
Nov 29, 2011 saacadu markay tahay 9:10 PM
Waxay u egtahay hal heersare oo dejin ah! Waxaan ogaaday in dadka waawayn ay sidoo kale iibinayaan muraayadaha indhaha oo tayo sare leh oo ku dhejisan iPhone sidoo kale. Waxyaabaha waalan!